‘नाका’मा यसरी जन्मियो विपिनको हेयर स्टाइलसहितको क्यारेक्टर
Tue, Mar 19, 2019 | 13:25:46 NST
काठमाडौं, फागुन ३ – अमित श्रेष्ठद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘नाका’ फागुन १७ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
सिनेमामा विपिन कार्की, थिन्ले लामा,रविन तामाङ, शिव मुखिया, प्रकाश गन्र्धव , सुजन थापा मगर, राम भजन कामत, अभिषेक सुवेदी र केशव राईलगायतका कलाकारहरु रहेका छन् ।
सिनेमाका निर्माता प्रविन टक्की कार्कीले हुन भने यसका लेखक अभिषेक सुवेदी हुन । प्रस्तुत छ निर्देशक र लेखकसँग गरिएको सिनेमा गफ ।
‘नाका’ १७ गतेबाट उपत्यका बाहिर र फागुन १८ बाट उपत्यकामा रिलिज हुदै छ । किन रिलिज डेट दुईवटा राखिएको ?
निर्देशक श्रेष्ठ : हामीले होली स्पेशल भनेर रिलिज गर्न लागेका हौ । त्यसकारण १७ गते चाहिं काठमाण्डौमा होली पर्छ अनि तराईमा १७ गते रिलीज गर्न लागेका हौं । भोलि पल्टि अर्थात १८ गते तराईमा होली हुन्छ । त्यसकारण त्यो दिन काठमाण्डौमा रिलिज गर्न लागेका हौं । होली दुई दिन भएकाले फिल्म रिलीज हुने डेट पनि दुईवटा नै राख्यौं ।
नाकामा के छ ?
लेखक सुवेदी : जहाँ चाहिं चाइनाले अतिक्रमण गरेपछि तिब्बतियनहरु भगेर धर्मशाला बस्न जानेको लर्को हुन्छ । नेपालको जुनजुन ठाउँहरुबाट छिर्न मिल्छ त्यहीबाट डाँडाको बाटो, हिउँको बाटो भएर पनि जान्छन् । त्यसैमध्यको सिन्धुपाल्चोकको सेरेफेरोबाट उता जाने तिब्बतियन नागरिकहरुलाई त्यही सेरेफेरोको ट्रान्सपोर्टरहरुले नेपालको बाटो कटाइदिने गर्छन् । यहि कथालाई समाबेश गरिएको छ ।
यसमा विपिन कार्कीको भूमिका कस्तो छ ?
लेखक सुवेदी : विपिन कार्की यसमाट्रान्सपपोर्टरको भूमिकामा हुनुहुन्छ ।
विपिनलाई नै लिनुको कारण ?
निर्देशक श्रेष्ठ : सबैलाई थाहा छ विपिनको बारेमा त उसको क्यारेक्टर वाइज छुट्टै पहिचान छ । फेरी उसंग मपहिला देखिनै काम पनि गरिराखेको हो । अर्को कुरा उसको कलाकारिता र अभिनयले मलाई एकदम इम्प्रेस गरेको थियो । त्यसकारण मैले विपिनलाई लिएको हो ।
‘नाका’मा नै गएर छायाँकन गर्नुपर्ने गाह्रो अप्ठेरो वा रमाइलो के भयो ?
निर्देशक श्रेष्ठ : छायांकनका बेला अप्ठेरो , रमाइलो सबै हुन्छ होइन । खासगरी म पनि बाह्रबिसेमानै जन्मिएको । त्योठाउँमा मैले पहिलेदेखिनै यो कथा देखेको छु भोगेको छु । त्यसकारण म स्थानीय बासिन्दा भएको कारण पनि खासै अप्ठेरो चाहिं भएन । हामी संग एउटा राम्रो समूह थियो एकअर्कालाई सहयोग गर्ने खालको त्यसकारण पनि अप्ठेरो झेल्नुपरेन ।
अभिषेकजी तपाईँ चाहिँ ‘नाका’मा कलाकारको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ ?
लेखक सुवेदी : हजुर एउटा सानो भुमिकामा छु । म चाहिं दबाई पसले हो । आफू पनि खान्छु अरुलाई पनि दबाई बेच्छु ।
विपिनको हेयर स्टाइल कसरी जन्मियो ?
निर्देशक श्रेष्ठ : स्टोरी लेखनको क्रमदेखिनै विपिन र हामीसँगै थियौं । त्यसैबेलादेखिनै क्यारेक्टरमाा हामीले रिर्सच गर्न थाल्यौं । स्थानीय बासिन्दाहरुसँग विपिनलाई घुलमिल गरायौं । क्यारेक्टरहरु स्टडी गर्न लगायौं । त्यही क्रममा त्यहा एउटा भाई थियो त्यस्तै हेयरस्टाइल गरेको अनि उसलाई नै क्लिक गर्यौ ।